umatshini wokondla izilwanyana ukwenzela ukutya kwenkukhu,umatshini wokutya kwenkukhu
Umthamo:700~ 800kg / h
Ngenxa yokwanda kwetekhnoloji, umatshini wokupheka wenkukhu uphakathi koomatshini abatsha emarikeni. Benza ukuba kube lula ukwenza i-pellets kwiintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana ezifana intlanzi, igusha, iinkomo, inkukhu, umvundla, inkukhu, idada, itshizi, amarhanisi phakathi kwabanye. Umatshini uyakwazi ukwenza iipellets zedayimitha ukusuka kwi-2mm ukuya kwi-8mm. Inomthamo wokuvelisa i-800kg / iyure ukuya kwi-1000kg / iyure. Oku kuthetha ukuba unokulawula isantya semveliso kuxhomekeke kwimfuno kwintengiso. Umatshini wokwenza izilwanyana ukongeza amandla kumafama asezingeni elincinci kwimarike kuba angatyala imali encinci anayo ngomatshini.
Izibonelelo zoMatshini woKwenza izilwanyana
Inendleko eziphantsi zokuvelisa: Umatshini wokutya iinkukhu awudingi abantu abaninzi ukuba basebenze. Inyaniso, idinga umntu omnye okanye ababini ukuba bayisebenzise. Oku kunciphisa kakhulu iindleko zabasebenzi ezichaphazela ubukhulu becala indleko zemveliso. Ixabiso eliphantsi lemveliso lakhokelela ekunyukeni kwimarida yenzuzo.
Iindleko zokunciphisa ezincitshisiweyo: Umatshini wokufuya inkukhu ulula kwaye incinci ngenxa yoko kulula ukuyithenga nokuyifaka. Udinga nje imizuzu embalwa yokudibanisa iinxalenye ezahlukeneyo. Oku kunciphisa inani lemali efunekayo ukubiza abasebenzi abafanelekileyo ukuba bayihlanganise. Udinga kuphela umntu ofanelekileyo nomnye ukuze umncede.
Ngumatshini otya imali ophantsi: Ngenxa yobukhulu bayo obuncinci, umatshini wokondla izilwanyana ufuna indawo encinci. Oku kunciphisa iindleko zokuqesha indawo enkulu yokuyifaka kunye nexesha elifunekayo lokuyifaka.
Inesicelo esibanzi: Umatshini wokufuya iinkukhu unakho ukuvelisa ubungakanani obahlukileyo beepellethi zeenkukhu ezahlukeneyo kunye nemfuyo. Oku kuthetha ukuba ungondla zonke izilwanyana zakho usebenzisa umatshini omnye ngaxeshanye. umatshini wokwenza iinkukhu wenza lula ukuba abalimi bakwazi ukukhulisa iintlobo ezahlukeneyo zezilwanyana kwiifama zabo.
Inkqubo yokuPhuhlisa iiNkukhu
umatshini wokondla izilwanyana njengoko kuchaziwe ngaphambili ngumatshini omncinci nongaphantsi kakhulu. Oku kwenza ukuba ukuhanjiswa kwee-pellets kube lula ukuyiqonda. Inkqubo yokuqala kukuzisa izinto zokwenza i-pellets. Oku kubandakanya isidlo seembotyi zesoya, isidlo sombona, ivithamini phakathi kwabanye.
Eli linyathelo lokuqala lokuqinisekisa ukuba zonke iinkozo ezinkulu zityhobozwa kwiifom zomgubo. Imayile yokutya yenkukhu inomatshini wokukrola owenzelwe ngokukodwa ukutyhoboza. Ukutya kombona, igumbi lomtshato, ingqolowa, iimbotyi, isidlo esenziwe ngeoyile, isoya yeembotyi zesoya inokuba zizinto ezinkulu kwaye ngenxa yoko kufuneka iphumelele inkqubo. Bayiswa kumatshini otyunyuziweyo apho batyunyuzwa babe ngumgubo ocolekileyo. Ngaphandle kwale nkqubo, inokuba isondele ekunokwenzeka ukwenza i-pellets.
Inkqubo ye-pelletizing ibandakanya umngxunya wepellet wokutya kwenkukhu. Oku kwenzelwa ukuba ucinezele i-mesh yokutya kunye neefomathi zepellets. Lo matshini wenza ukutya kwezilwanyana uyakwazi ukwenza iilenzi zibe ziisayizi ezifanayo. Oku kubandakanya ububanzi kunye nobude obufanayo. Oku kukuqinisekisa ukuba umatshini wokwenza iinkukhu wenza umatshini uvelise ubungakanani obufunekayo bezilwanyana ezahlukileyo ukuqinisekisa ukuba ubonelela ngento efunekayo kunye nokukhusela inkcitho ngexesha lokutya.
Icandelo lobuchwephesha leeNdlela zokuTya iinkukhu
Ividiyo yomatshini wokondla izilwanyana